Instagram အကောင့်တခုကိုဘယ်လိုပယ်ဖျက်မလဲ Gadget သတင်း
ပါပလော Aparicio | | လူမှုရေးကွန်ယက်
ကျွန်ုပ်တို့ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားသည့်အရှုပ်တော်ပုံများအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်ပိုမိုစိုးရိမ်သောသုံးစွဲသူများမဟုတ်ပါ။ ဂူဂဲလ်သို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ဒစ်ဂျစ်တယ်မှန်ဘီလူးရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးမှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ရွေ့လျားနေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံရိပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိအကျွမ်းများ၏ပုံရိပ်ပင်ရှိသည်။ ရုပ်ပုံများအရ Facebook တွင်အဓိကလမ်းကြောင်းနှစ်ခုဖြစ်သော Facebook ကိုယ်တိုင်နှင့်၎င်း၏ဓာတ်ပုံလူမှုကွန်ယက် - Instagram တို့ရှိသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သင်ဤလူမှုကွန်ယက်တွင်ဆက်လက်မပါဝင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုသင်ကြားပါမည် သင်၏ Instagram အကောင့်ကိုဘယ်လိုဖျက်ပစ်မလဲ.
Instagram အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်၊ သင်၏ပရိုဖိုင်း၏အကြိုက်များကိုအကြိမ်ကြိမ်သွားပြီး၎င်းကိုသင်ရရှိရန်နည်းလမ်းရှာမတွေ့ပါ။ ကောင်းစွာမြင်နိုင်သောအချက်မှာအကောင့်တစ်ခုအားခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်အားလုံးကိုလက်လှမ်းမမှီစေဘဲပြန်လည်ချိတ်ဆက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည်။ ပေးရဖို့အကောင်းဆုံး သင်၏ Instagram ကိုအမြဲတမ်း download လုပ်ပါ ကျနော်တို့အောက်ကအဆိုပြုထားသောဖြတ်လမ်းယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
instagram.com ကိုသွားပြီး၊ username နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ပါ။ https://instagram.com/accounts/remove/request/permanent နောက်ပုံတစ်ပုံမှာတွေ့ရတဲ့စာမျက်နှာဆီကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုလုပ်ရမယ့်အရာကတော့ drop-down menu (၁) ထဲကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကိုရွေးပြီး၊ ငါတို့ရဲ့စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ (၂) ။ အမြဲတမ်းငါ့အအကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်.
ဘယ်လိုမျိုးမဖြစ်နိုင်လဲ pop-up window မှာ OK ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် ၂ တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုဖျက်မိပါကဓာတ်ပုံများ၊ မှတ်ချက်များ၊ အကြိုက်များနှင့်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားဒေတာများကိုအမြဲတမ်းပယ်ဖျက်ပြီးပြန်လည် ရယူ၍ မရပါ။ နောင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လိုပါကအခြားအသုံးပြုသူအမည်ကိုအသုံးပြုရမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လူမှုရေးကွန်ယက် » Instagram အကောင့်တစ်ခုဖျက်နည်း
Irma maribel sanche ချားဗေ့စ် ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ၊ စာမျက်နှာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဖော်ပြရန်သူတို့မရှင်းပြပါ။ သူတို့သည်မည်သို့ပေါ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ဖျက်လိုသောအကောင့် ၂ ခု ၁ မတော်တဆဖွင့်လှစ်ခဲ့သောနောက်ဆုံးမှတ်တမ်းကို ဖျက်၍ maribel2 နှင့်အတူနေလိုပါသည်
Irma maribel sanche chavez အားပြန်ပြောပါ